रिदम’ गर्लसँग गम्भीरले लगनगाँठो कस्दै - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
Posted by Milap Subedi | ६ मंसिर २०७४, बुधबार ०९:२१ |
६ मंसिर,काठमाडौँ । नायिका निश्मा घिमिरे र कोरियोग्राफर तथा मोडल गम्भीर विष्टको विवाहको मिति तय भएको छ । लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको यो जोडी मंसिर ७ गतेबाट श्रीमान-श्रीमती बन्दैछन् । ‘लभ यू बाबा’ ‘रिदम’, ‘जन्मभूमी’फिल्ममा अभिनय गरेकी निश्मा अभिनीत नयाँ फिल्म ‘हैरान’ प्रदर्शनको तयारीमा छ ।
फिल्म ‘लुट’बाट नृत्य निर्देशन थालेका गम्भीर विष्टले झन्डै तीन दर्जन फिल्ममा नृत्य निर्देशन गरिसकेका छन् भने दुई दर्जन बढी म्यूजिक भिडियोमा मोडल भएर पनि काम गरेका छन् । गम्भीरकी डान्स स्टूडेन्ट हुन् निश्मा । विष्टसँगै नृत्य प्रशिक्षण लिएपछि हाल निश्मा पनि उनको मैतीदेवीस्थित डान्स इन्स्टिच्युट ‘डान्स फिवर’की प्रशिक्षक भएकी छिन्।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, विवाहमा दुई पक्षका परिवारमात्र उपस्थित रहनेछन् । कौशलटार ब्याङ्क्वेटमा विवाह सम्पन्न भएपछि यो जोडीले मंसिर ८ गते बैभब पार्टी प्यालेसमा प्रीति भोजको आयोजना गरेका छन् । सिनेवृतमा गाइँगुइँ प्रेमको हल्ला चलेपनि उनीहरुले आफूहरु साथी मात्र रहेको भन्दै वास्तविकता लुकाउँदै आएका थिए ।
Previousरोल्पामा चुनावलाई कर्मचारी खटिए
Nextतीब्बत–नेपाल प्रसारणलाइन सम्भव, चीनलाई प्रस्ताव पठउँदै सरकार
६ भाद्र २०७३, सोमबार ०८:२८
चितवनमा बर्डफ्लु, रुपन्देहीमा उच्च सतर्कता !
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १४:५६
एकताबारे अन्योल चिर्न ओली र दाहाल बीच भेटवार्ता !
२ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:२१